Teôlôjia dôgmatika - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Teolojia dogmatika)
Ny Teôlôjia dôgmatika na Dôgmatika dia sampan'ny teôlôjia kristiana izay andalinana ny votoatin'ny fanekem-pinoana kristiana, dia ny amin'ny finoana an'Andriamanitra sy ireo asan'Andriamanitra, indrindra ny teolojia ofisialy eken'ny Fiangonana.
Ny teôlôjia dôgmatika dia azo faritana ho fanehoana amin'ny "fomba siantifika" ny foto-pampianarana manontolo momba an' Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra miseho ety ivelany, araka ny tenim-pinoan'ny Fiangonana. Ny teolojia dogmatika dia manindry mafy ny maha zava-dehibe kokoa ny fahamarin'ireo fehezankevitra voasoratra mitaha amin'ny fahatsapana vokatry ny zavatra niainana sy ny zavatra tsapa amin'ny alalan'ireo taovam-pandrenesana. Ny dôgmatika dia fanamarinana sy famelabelarana ary fivoasana ny tenim-pinoana ampianarina ny Fiangonana.
1 Tantaran'ny teny hoe dogmatika
1.2 Fampiasana ilay teny
2 Fizaràn'ny dogmatika
Tantaran'ny teny hoe dogmatikaHanova
Avy amin'ny teny grika hoe δόγμα / dógma ny hoe dogmatika. Ny hoe δόγμα dia midika hoe "fiheverana" na "eritreritra manokana". Adika amin'ny teny malagasy amin'ny hoe "tenim-pinoana" ny hoe dogma rehefa ampiasaina hilazana ny fanambaràna momba ny zavatra inoana izay heverina ho fototra tsy azo iadian-kevitra ao amin'ny fivavahana iray.
Fampiasana ilay tenyHanova
Tamin'ny taonjato faha-17 no nampiasana ny teny hoe dogmatika voalohany. Ny zavatra sahanin'ny teôlôjia dôgmatika anefa dia efa nisahiranan'ny teôlôjiana kristiana talohan'izany fotoana izany. Ny dôgmatika kristiana voalohany dia ilay soratr'i Ôrigenesy hoe De Principiis (malagasy: "Ny amin'reo Fampianarana fototra"). Tamin'ny fiafaran'ny Andro Taloha dia boky mitondra ny lohateny hoe De Sententiarum (malagasy: "Ny amin'ny Fehezankevitra fototra") nosoratan'i Peter Lombard sy ilay atao hoe Summa Theologiae (malagasy: "Famintinana ny Teolojia") nosoratan'i Tômà avy any Akoino.
Amin'izao fotoana izao dia tsy heverina ho isan'ny teolojia dôgmatika ny apôlôjetika fa lasa taranja mahaleo tena atokana ho fampidirana sy ho fototry ny teolojia dôgmatika . Ireto avy ireo taranja mifameno aminy ao amin'ny teôlôjia sistematika: ny teôlôjia etika (môraly sy sôsialy) sy ny teôlôjia fôndamentaly (teôlôjia fototra).
Ny teny hoe teôlôjia dôgmatika dia nanjary nampiasaina matetika kokoa taorian'ny Refôrmasiona prôtestanta sady nampiasaina mba hilazana ireo fanekem-pinoana izay nambaran'ny Fiangonana ampahibemaso. Ohatra amin'ny teôlôjia dogmatika ny fanambaràna foto-pampianarana (doktrina) na tenim-pinoana (dogma) izay noraiketin'ireo kônsily voalohandohany tao amin'ny Fiangonana mba hamahàna olana teolojika sy hanoherana ny fampianaran-diso. Ny fanekem-pinoana sy ny tenim-pinoana vokatry ny fivorian'ny Fiangonana dia manam-pahefana sady tsy maintsy ampiharin'ny Kristiana, noho izy ireo nambaran'ny Fiangonana ampahibemaso. Isan'ny tanjon'ny teolojia dogmatika ny mamolavola sy mampita izay fampianarana heverina ho zava-dehibe indrindra ao amin'ny fivavahana kristiana.
Ireto ireo zana-taranja lehibe indrindra ao amin'ny dogmatika:
ny Kanônan'ny Baiboly;
ny Antropolojia teolojika na Antrôpôlôjia kristiana;
ny Trinite: momba ny maha iray-telo ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina;
ny amin'Andriamanitra Ray: io no atao hoe Teolojia, amin'ny heviny mifintina;
ny Kristôlôjia: momba an'i Jesosy avy any Nazareta amin'ny maha Kristy azy;
ny Sôteriôlôjia: momba ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy;
ny Foto-pampianarana ny amin'ny Fahasoavana (izay mifandray amin'ny Soteriolojia);
ny Pneomatôlôjia: momba ny Fanahy Masina;
ny Anjelôlôjia: momba ny anjely;
ny Ekleziôlôjia: momba ny Fiangonana;
ny Sakramenta : momba ny Batisa (na Batemy) sy ny Fanasan'ny Tompo (na Eokaristia), sns.
ny Eskatôlôjia: momba ny fanantenana ny fiovan'izao tontolo izao sy ny olombelona tsirairay ho tongalafatra any amin'ny andro farany: fampianarana ny amin'ny zavatra ho avy any am-parany;
ny Mariôlôjia: mikasika an'i Maria inoana ho Renin'Andriamanitra (an'ny fiangonana katôlika sy ôrtôdôksa manokana izany).
Ankoatr'ireo zana-pizaran'ny teôlôjia dôgmatika ireo dia samy manana ny fomba fanaovany dogmatika ny antokom-pinoana kristiana isan-karazany, ohatra amin'izany ny dôgmatika prôtestanta, ny dôgmatika katôlika, ny dôgmatika ôrtôdôksa, sns.
↑ Jereo ny hoe "dogme" ao amin'ny rakibolana frantsay-malagasy Vitasoa, nosoratan'ny Profesora Rabenilaina sy ny namany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Teôlôjia_dôgmatika&oldid=995084"
Dernière modification le 27 Jolay 2020, à 07:31
Voaova farany tamin'ny 27 Jolay 2020 amin'ny 07:31 ity pejy ity.